I-Semalt: Imgang Mit Unerwünschten E-Mails Awugaxekile
Uke wavula i-imeyili yakho futhi wathola ama-imeyili angaphezu kweyodwa angafundiwe ebhokisini lakho lokungenayo, amaphesenti angu-95 awunasithakazelo ekufundeni? Ezimweni eziningi, uzosuswa ukuba ususe i-imeyili lapha naphandle, kodwa umsebenzi ungabandakanya ukucabangela ukuthi kufanele ube nesifiso sokuqinisekisa ukuthi awukhiphi i-imeyili yesithakazelo. Lokhu kungaba yinkimbinkimbi uma uqaphela ukuthi kufanele uphinde uphinde uhlele ngesonto elilandelayo.
Lokhu kubonisa indlela inkinga ye-imeyli eyanda ngayo, okuqukethwe okungafuneki okuningi nokuya kubhokisi lakho lemilayezo engenayo kuze kube seqophelweni lapho ufisa ukuvimbela yonke i-akhawunti. Noma kunjalo, lokhu akunakwenzeka ngoba i-imeyili ixhunywe ku-Facebook, eBay, PayPal, njll, nokususa i-imeyili kuzoholela ekuhluphekeni komhlobo ohlukile.
U-Ross Barber, i- Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, utshela indlela amaqhinga amane alandelayo amsize ngayo ukubuyisela i-akhawunti yakhe kubagijimi be-spammers:
1. Landelela umthombo ovame ukukuthumelela ama-imeyili angafuneki. Ungayitholi indlela evilaphayo ehlanganisa ukususa ama-imeyili. Vula ngamunye wabo futhi uzikhiphe ohlwini futhi ngemuva kokwenza kanjalo, bheka ikheli lomthumeli ku-imeyili yakho. Ngokulandelayo, kuthathwa njengokuphephile ukususa yonke into ephuma ohlwini lwakho lomphumela. Ngenxa yokuthi uzikhiphe ohlwini, ngeke usathola ama-imeyili avela kumithombo enjalo.
2. Umthetho udinga ukuthi wonke ama-imeyili wezebhizinisi afanele abe nenketho yokuzikhethela. Naphezu kwemfuneko, ngabona ukuthi iningi lama-imeyili ami angafuneki alikhansela noma alikhiphe izici. Uma uqaphela ukuthi uthola i-imeyili evela emthonjeni ongenayo inketho yokuphuma, thumela i-imeyili elandelayo:
"Sicela uthathe (faka ikheli lakho le-imeyili) kule imeyili kusukela ohlwini."
Asikho isidingo sokwengeza noma yiluphi olunye ulwazi kusukela i-imeyili isendaweni. Kufanele ulindele impendulo ngesimo esithi "Kwenziwe!" njengobufakazi bokuthi uphendule ngempumelelo inkinga yama-imeyili angafuneki.
3. Ukudala amafolda kukuvumela ukuba uhambe ngokushelela ngokusebenzisa ama-imeyili akho athuthuka phambili. Lokhu kungenelela okungcono kakhulu ekuphatheni i-imeyili yakho ngoba kukusiza ukuba ubhekane nama-imeyili angenayo futhi ugcine ibhokisi lokungenayo lihlanzekile. Isibonelo, ngidale amafolda ayisikhombisa ngaphakathi kwe-imeyili yami futhi ngabanika amagama ahlukene kuye ngokuthi indima yabo eyinhloko. Uma ngifuna ukulondoloza i-imeyili, izogcinwa ngokuphelele kwelinye lala mafolda. Lokhu kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi ibhokisi lami lokungenayo lihlanzekile futhi lihlanzekile ngaso sonke isikhathi.
4. Uma usukwazi ukulungisa i-imeyili yakho, kusobala ukuthi awufuni ukubuyela esimweni sayo sangaphambilini. Lawula ibhokisi lakho lokungenayo ngokuphumelelayo ngokuqinisekisa ukuthi uhlangabezana ne-imeyili engathandeki ngokushesha. Uma uziqeda lokhu, cishe uzothola izinkulungwane zama-imeyili ukuhlehlisa ngamunye. Uma ama-imeyili angafuneki aphinde avuselele, ungakwazi ukubhekana nesimo ngokuphinda isinyathelo esisodwa nesithupha.